You are here: Home Home Horumarka Gobollada: Is-barbar-dhiggaTogdheer iyo Sanaag
Waxaan marka hore u mahad-naqayaa Ilaahay, marka labaadna waxa mahad leh Mareegta dharaaro.com oo ah mid mar walba u heellan soo-gudbinta fikiradaha kala duwan ee bulshada oo si caddaalad iyo hufnaani ku dheehan tahay loo qoro.
Haddaan mahad-naqa intaa ku dhaafo oo aan maqaalkayga u soo daaddago waxaan manta kaga hadlayaa talo-la’aanta bulshada reer Sanaag ka haysata dhinaca horumarka iyo isku-duubnida, aniga oo u dhashay Gobolkaa oo dibudhiciisa ka damqanaya.
Sida ay dad badani ka war qabaan gobolka Sanaag waa gobolka ugu ballaadhan Somaliland, waana meel Alle ku mannaystay khayraad dabiiciya, cimilo iyo jawi wanaagsan. Waa gobol xeeb dheer leh, waa gobol buuralay ah oo bana iyo dooxooyinba leh. Haddaba iyada oo ay sidaa tahay waa gobolka Somaliland ugu liita xagga kaabayaasha dhaqaalaha ,bulshada iyo horumarka, waxaana taas ugu wacan talo-la’aanta bulshada reer Sanaag oo ah fadhiid iyo kor-joogto oo keliya.
Baahida uu gobolku u dhitinayaa waa waddo-xumaanta taas oo aan anigu sababteeda u aanaynayo bulshada u dhalatay Sanaag dhammaanteed, waana tan hormuudka ka ah horumar-la’aanta jirta.
Sida beryahan danbe jirtay waxaa laysku xidhayaa waddada Burco iyo Hargeysa oo toos ugu kala gooshaysa, waanan ugu hambalyeynayaa reer Togdheer kartida ay muujiyeen ee Ku-dayashada mudan, wanaa mid ku tusaysa isku-xidhnaanta bulshada reer Togdheer oo maalin walba aayahooda bulshannimo katashada haddey ahaan lahayd biriishyo, jaamacad, waddooyin iyo arrimo kale oo badanba.
Waxay tani ka markhaati-kacaysaa horumarka ay reer Togdheer gaadheen iyaga oo isku duuban, dhinaca kale waxay ku tusaysaa tashi la’aanta reer Sanaag.
Ogaalkey ilaa iyo maalintii aan garaadsaday waxaan maqlayey waddada Burco iyo Ceeri-gaabo ayaa la dhisayaa. Mashruucii Faanoole oo kale ayay noqotay. Waxaan xusuustaa 2002dii baan filayaa in ay ahayd e’ mar uu Alle haw naxariisto e’ Madaxweynihii hore Maxamed Xaji Ibrahim Cigaal booqasho ku yimid magaalada Ceeri-gaabo baryahaa dugsia dhexe ee Jeembar (ex-lafoole) ayaan ku jiray, gegeda dayuuradaha ayaanu ku soo dhowaynay carruur iyo cirrooleba kadibna wuxu qudbad ka jeediyay garoonka kubbadda ee magaalada Ceeri-gaabo, waxaana laga codsaday in uu waddada wax ka qabto arrinta ee dawaana uu aqbalay balse dad badan ayaa ku tiraabay ballan-qaad waanu ka dheregnaye ilaa dawladdii. Waxaan taas uga socdaa ilaa 2002dii reer Sanaag boqol km oo horudhaca ma ay tahliwaayin ee talo ayaa seegtay, waxaan ku soo gunaanadayaa maqaalkaygan gaaban talo aan u soo jeedin lahaa reer Sanaag.
Ugu horreyn Qurba-joogga waxaan odhan lahaa gobolka halkiinna ayaa looga soo dhacay e’ intaad meelo kale guryo waaweyn ka dhisanaysaan hoygiinna ka dhista. Ta kale Jaaliyad dhammaystiran samaysta oo noqda kuwo meeshooda wax ku soo celiya talo iyo tusaaleba sida jaaliyadaha kale. Madaxda gobolka waxaan odhan lahaa idinka ayaa gobolka magaciisa ku hadla e’ gobolka xaqiisa u soo dhiciya oo horumar u sameeya, ma waxaad samaysan kari weydeen 1km oo aad magaalada dhex marisaan? Jawaabtu waa maya. Ardaydana waxaan odhan lahaa idinka ayaa ah qorraxdii ifin lahayd Sanaag e’ noqda kuwa gobolkii waxay barteen dib ugu celiya oo aan meel kale uga faa’iidayn. Soomalidu waxay ku maah-maahdaa: “Lama-huraan waa caws jiilaal.” Sanaagna waa lama-huraan reer Sanaagow,
By: Oolol Yaasiin Axmed Xaaji Nuur